musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Saint Kitts neNevis Kuputsa Nhau » Zvinodiwa zvekufambisa zvakagadziridzwa kuSt. Kitts & Nevis
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Health News • nhau • Kutarisirwa • Saint Kitts neNevis Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Vafambi vese izvozvi vanofanirwa kutora bvunzo yeRT-PCR 48 kusvika 72 maawa vasati vaenda
Kitts & Nevis yakawedzera Montpelier Kudyara & Gungwa kune iyo runyorwa rweMahotera Akatenderwa mahotera evafambi vekunze. Montpelier Kudyara & Gungwa ihotera yepamusoro yezvitoro muNevis.
Iyo Federation parizvino haisi kugamuchira bvunzo dzeRT-PCR dzeVafambi Vepasi Pose, Vemunyika / Vagari uye Vasiri Venyika / Vasiri-Vagari inoitiswa neLabCorp. Ndokumbira utarise, zvinogamuchirwa COVID-19 PCR bvunzo dzinofanira kutorwa nasopharyngeal sampuro. Kuzviongorora-wega, bvunzo dzinokurumidza, kana bvunzo dzemumba zvinozotorwa senge zvisiri izvo
Vafambi vese izvozvi vanofanirwa kutora bvunzo yeRT-PCR 48 kusvika 72 maawa vasati vaenda.
Zvimwe zvese zvinodiwa pakufamba zvinoramba zvisina kuchinjika uye zvinofanirwa kutumirwa kune avo vari kuronga rwendo kuenda kuFederal panguva yeChikamu 1 chekuvhurazve.
Vese vanouya vanokwira kuenda kuSt Kitts & Nevis vanofanirwa kupedzisa iyo Fomu Rokubvumidzwa Kwekufambisa, iyo inogona kuwanikwa pa www.knravelform.kn, vasati vasvika. Vafambi vekune dzimwe nyika vanofanirwa kuve neyakaipa yavo RT-PCR bvunzo uye pekugara pekugara kuti vapedze iyo Fomu Yemvumo Yekufamba inodikanwa yekupinda. Kana iyo fomu yapera uye yaendeswa, ine kero yeemail inoshanda, inozoongororwa, uye mushanyi achagamuchira tsamba yekubvumidzwa yekupinda muFederal.